इ-कोर्सको लागि गोल्फसटको कोर्स र समीक्षा
सफ्टवेयर र अनुप्रयोगहरू आईओएस मात्र
स्ट्यान्डआउट स्कोर, तथ्याङ्क र ग्राफिक्स विशेषताहरू
हामी के जस्तै
उत्कृष्ट तथ्याङ्क र ग्राफिक्स।
अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रम डाटाबेस, अन्तर्राष्ट्रिय सहित, कुनै अतिरिक्त लागतमा।
राम्रो दूरी-देखि-तह सुविधा।
हामी के गर्दैनौं
आईफोनमा ब्याट्री, पानी प्रतिरोध कमजोरीहरू छन्।
गोल्फट्याट एकसाथै एकैसाथ डिजाइन गरिएको अनुप्रयोगमा यो सबै कुरा दिन्छ
Shotzoom सफ्टवेयर द्वारा Golfshot गोल्फ जीपीएस अनुप्रयोग पांच सर्वश्रेष्ठ गोल्फ जीपीएस एप्स को लागि हाम्रो छनौट मा छ। हामीले यसलाई पेंसिल्वेनिया र वर्जीनियामा धेरै राउन्डहरूको लागि प्रयोग गर्यौ। गोल्फट्याटको प्रसिद्धिको दाबी यसको उत्कृष्ट तथ्याङ्क र ग्राफिक्स क्षमता हो, तर बाँकी कार्यक्रम धेरै राम्रो तरिकाले डिजाइन गरिएको छ र आईफोन एप स्टोरमा केहिसँग प्रतिस्पर्धी छ।
गोल्फट्याटको पाठ्यक्रम डाटाबेसले 15,000 भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रमहरू समावेश गर्दछ, र Golfshot नयाँ पाठ्यक्रम अनुरोधहरू समायोजन गर्दछ।
गोल्फटट कम्पनी दावीको रूपमा "प्रयोग गर्न सजिलो, बुझ्न र साझेदारी गर्न" सजिलो छ, तर अझै पनि सिक्न वक्रको एक बिट छ। हामी एपको आत्म-निहित प्रकृतिलाई मनपर्छौं; तपाईं आईफोनबाट सबै चीज व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईंको तथ्याङ्क हेर्नको लागि तपाईको कम्प्युटरबाट वेब साइटमा लगाउन आवश्यक पर्दैन, उदाहरणका लागि।
नयाँ टी टाइम्स प्लस स्कोरकार्ड संस्करण
Golfshot क्लासिक को अतिरिक्त, यहां समीक्षा को, एक टी टाइम्स प्लस स्कोरकार्ड संस्करण उन अतिरिक्त सेवाहरु प्रदान गर्दछ र एक बेहतर ग्राफिक इंटरफ़ेस र फ्लाईवर हो। प्लस संस्करण पनि Apple Watch को साथ उपयुक्त छ।
गोल्फटट गोल्फ जीपीएस आईफोन एप प्रयोग गरी
गोल्फसटको उद्घाटन स्क्रिनले खेल गोल्फ, तथ्याङ्क, स्कोरकार्ड र खातालाई देखाउँछ । खेल गोल्फ चयन नजिकैको कोर्सहरू खोज्नका लागि आईफोनको जीपीएस प्रयोग गर्दछ र पाठ्यक्रमको शहर र दूरी माइलमा सूचीबद्ध गर्दछ। तपाईं पनि अन्य ठाउँहरू खोज्नुहोस् / ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो कोर्स पछि आइपुगेको छ, तपाईंको टी बक्स चयन गर्नुहोस् र, यदि तपाई चाहानुहुन्छ भने, स्कोरको लागि तपाईंको समूहमा (चार सम्म माथि) गोल्फ नाम दिनुहोस्।
पेंसिल-र-कागजको आदत तोक्न गाह्रो हुन सक्छ, तर हामीले सङ्कलन सुविधालाई प्रयोग गर्न सजिलो छ र धेरै कारणले धेरै सार्थक पार्यो। एप्सको स्कोरकार्ड स्वतः स्वचालित रूपमा तपाईलाई पठाइएको छ (तपाईले तपाइँको समूहमा फर्वार्ड गर्न सक्नुहुन्छ) जब तपाईं आफ्नो राउन्ड समाप्त र भण्डार गर्नुहुन्छ। त्यसो भए पनि गोल्फट्याटको उत्कृष्ट तथ्याङ्क र ग्राफिक्स सुविधाका लागि ढोका खोल्दछ।
आफ्नो स्कोर र कोर्स को आधार मा, Golfshot ले स्वचालित रूप देखि विनियमन, बालुवा बचाव र scrambling प्रतिशत मा ग्रीस को गणना गर्दछ र उनलाई राम्रो पाई ग्राफ्स मा प्रस्तुत गर्दछ (केवल तपाईंको लागि, तपाईंको चारों ओर अन्य को लागि नहीं, हुनत तपाईं प्रति पट्टे को संख्या दर्ज गर्न सक्छन् तपाईंको समूहमा अरुको लागि छेद)।
स्वत: हस्तलिपि सुविधा पनि खोल्न वा बन्द हुन सक्छ। स्केटिङ छोटो छोटो र स्पिन-व्हील इन्टरफेस मार्फत गरिन्छ जुन आईफोनको टच फीचरको राम्रो प्रयोग गर्दछ, र प्रयोगको लागि खुशी छ।
तपाईंले पहिलो पटक स्क्रिन बजाउने बेलामा तपाईंलाई पङ्क्ति दूरी र लेआउट अनुसार पिन, बंकर र पानीको दूरी सहित, र दूरी दूरी पर्दछ, आधारमा धेरै यार्डहरू देखाउँदछ। हामी विशेष गरी लेस्पर दूरीको सुविधा जस्तै। जब तपाईंसँग तपाइँको सबै औंलाहरू तपाईंको औंलामा छ भने तपाईसँग तपाइँको प्रो पाडी छ जस्तो लाग्छ।
यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ भने, तपाईं हवाई दृश्यमा स्विच गर्न सक्नुहुन्छ (गोल्फटट दृष्टान्तको सट्टा हवाई विमानहरू प्रयोग गर्दछ), अवलोकन देखाउन। हवाई छवि तपाईले अग्रिम रूपमा स्वचालित रूपमा जूम गर्नुहुनेछ, तपाईंको दृष्टिकोणको लागि हरियो क्षेत्र देखाउँदछ। तपाईं पनि मैन्युअल रूप छवि छवि वा बाहिर गर्न सक्नुहुन्छ। हामी गोल्फट्याटले तपाईंको अन्तिम शट दूरीको क्षमतालाई पनि मन पराउछौं।
बचत, विश्लेषण, तपाईंको राउन्ड ई मेल गर्दै, र संक्षेपमा
तपाईं पूरा हुँदा आफ्नो राउन्ड सुरक्षित गर्नुहोस्, र तपाईंको स्कोरकार्ड सुरक्षित गर्नुहोस्। गोल्फटटले राउन्डको दौडान निरन्तर स्कोर र तपाईंको चारौंको लागि कुल जानकारी प्रदान गर्दछ र गोलको समाप्तिमा राम्रो स्कोरकार्ड ग्राफिक प्रस्तुत गर्दछ। र राउन्ड पूरा गर्न राम्रो स्कोरकार्ड ग्राफिक प्रस्तुत गर्दछ।
गोल्फट्याटले पछिल्लो पाँच वा अन्तिम 20 राउन्डको लागि संचयी स्कोरको लागि ग्राफिक्स पनि प्रस्तुत गर्दछ। म एक तथ्याङ्क हाउन्ड छैन, तर Golfshot ग्राफिक्स र उपयोग को आसानी मलाई जित्यो, र यो तपाईंको खेलमा भयानक अंतर्दृष्टि प्रदान गर्दछ र तपाइँलाई काम गर्न आवश्यक छ।
हामीले गोल्फसटको सटीकतालाई पाठ्यक्रममा केही गजल भित्र पक्कै राम्रोसँग भेट्ट्यौं।
त्यहाँ गोल्फ जीपीएसको रूपमा आईफोन प्रयोग गर्न केही सीमाहरू छन्। ख्याल गर:
आईफोन पानी प्रतिरोधी होइन, त्यसैले तपाईंले गीलामा यसको रक्षा गर्नु पर्छ।
एक आईफोन पनि एक समर्पित गोल्फ जीपीएसको रूपमा छरितो छैन, जुन तपाईं सचमुच डच गर्न सक्नुहुन्छ, फ्याँकिएको, र चिन्ता बिना छोड्नुहोस्।
आईफोनको लागि जीपीएस अनुप्रयोगहरू धेरै शक्ति प्रयोग गर्छन्। हामी सजिलै ब्याट्रीको ब्याट्रीको जीवन खिच्न सक्षम भयौं। प्रत्येक कुञ्जी प्रत्येक प्वाल अंक पछि आईफोन सोनी बटन क्लिक गर्नु हो। गोल्फट्याटले अन्य ब्याट्रि-खिचाउने सुझावहरू पनि सुझाव गर्दछ, जस्तै WiFi बन्द।
एक राम्रो फीचर: यदि तपाईंको कलको समयमा कल आउँदछ भने (तपाइँ यसलाई उत्तर दिनुहुन्न, दाँया?) यसले गोल्फसट एपलाई अवरोध गर्नेछ, तर एप पुन: सुरू गर्नेछ जुन तपाइँले कल गिरावट वा ह्याङ्गअपमा छोड्नुभयो।
एप स्टोरमा गोल्फसटको धेरै संस्करणहरू छन्, त्यसैले "गोल्फट्याट: गोल्फ जीपीएस" को लागी संस्करण यहाँ पूर्वावलोकन गर्नको लागि हेर्नुहोस्। कुल मिलाएर, Golfshot एक तथ्याङ्क, सटीक, र रमाईलो प्रयोग अनुप्रयोग हो तथ्याङ्क सुविधाहरूसँग जुन तपाईंको खेलमा उपयोगी जानकारी प्रदान गर्दछ।
IPad को लागि शीर्ष संग्रहण कार्ड गेम
आईफोन र आईप्याडको लागि बर्नस र नोबल नाउ एप समीक्षा
25 सर्वोत्तम नि: शुल्क 'मर्नैपर्छ' एप्स अनुप्रयोगहरू
मामाको लागि शीर्ष 10 अनुप्रयोगहरू
आईफोन एप समीक्षाको लागि एभरोटोट
एप्पल टिभीमा केही राम्रो कसरी खोज्न सकिन्छ
कसरी ब्लुटुथ कीबोर्डलाई एप्पल टिभीमा जडान गर्नुहोस्
एप्पल टिभीसँग तपाइँको गृह कसरी स्मार्ट बनाउने
समीक्षा: YouTube बच्चाहरू आमाबाबु र बच्चा दुवैको लागि एक विजेता हो
तपाइँ किन तपाइँको कम्प्युटरमाथि ओभरक्ल गर्नुहुन्छ?
आउटलुकमा सुरक्षित प्रेषकहरूमा एउटा ठेगाना वा डोमेन कसरी थप्नुहोस्
याहू रचना गर्नुहोस्! सर्टकटसँग छिटो मेल सन्देश पठाउनुहोस्
तपाईंको एन्ड्रोइड उपकरणमा ब्ल्याटवेयर कसरी व्यवस्थापन गर्ने?
एक तालिका चिडियाघर टाइकोन पशु अनुकूलता
टेक्सास Sexting कानून
Windows Live Hotmail मा एक्सचेन्ज तत्काल सन्देशहरु
तपाईंको फेसबुक मित्रहरूसँग सम्पर्क राख्नुहोस् iChat प्रयोग गर्नुहोस्
वैकल्पिक आउटपुट मूल्याङ्कनहरू बुझ्न
डिजाइन र प्रकाशनमा निकटताको बारेमा जान्नुहोस्
युनिवर्सल स्टुडियोहरूमा तपाईंको क्यामेरा लिनको लागि सुझाव
पीसी अफ्रिकी दिवसको लागि पीसी बन्दुकहरू हेर्नुहोस्
विन्डोज एक्सपी कमांड प्रोम्प्ट आदेशहरू
विण्डोज 8 कमान प्रोम्प्ट कमान्ड (भाग 3)
एक्सेलमा डाटाबेस कसरी बनाउने?
8 आईफोन र एन्ड्रोइडका लागि ठूलो क्रिसमस खरीदारी सूची अनुप्रयोग
के वेब ब्राउजर वेब ब्राउजरको अन्त्य ल्याउनुहुन्छ?
आईफोनमा रिंगटोनहरू कसरी खरीदें
डिश नेटवर्कको ओटो हपले सीमित वाणिज्य स्लिपिङ अनुमति दिन्छ